भिडिओ रिपोर्ट- एलर्जीको कारण लाग्ने... :: डा. कुञ्जन आचार्य :: Setopati
डा. कुञ्जन आचार्य नाक,कान,घाटी रोग विशेषज्ञ
एलर्जी भनेको शरीरले कुनै तत्वसँग चाहिने भन्दा बढी ‘रियाक्ट’ गरेको भन्ने हो ।एलर्जी नाकमा हुन्छ,घाँटीमा हुन्छ,छालामा हुन्छ भने कसैलाई रातो दाग आउने पनि हुन्छ । जस्तै नाकमा बढी ‘रियाक्ट’ भयो भने हाछ्यु आउने,धेरै पानी बग्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा नाक बन्द हुने र खोकी लाग्ने हुन्छ।
एलर्जीले खोकी कसरी लाग्छ ?
एलर्जी नाकको पनि हुन्छ र घाँटीको पनि हुन्छ। नाक र घाँटी दुवैको एलर्जीले खोकी लाग्छ । नाकको एलर्जीले गर्दा पातलो सिंगान नाकको पछाडिबाट खसेर घाँटीमा आउँछ । त्यसले गर्दा खसखस हुन्छ अनि खोकी लाग्छ । घाँटीकै एलर्जीले पनि खोकी लाग्छ। ग्याष्ट्रिकले गर्दा एसिडमाथि आउँदा घाँटी खसखस हुन्छ अनि सुख्खा खोकी लाग्छ । खोकी त लागेको छ तर ‘कफ’ आएको छैन भन्ने चलन छ। हुनत ‘कफ’ भनेकै खोकी हो । तर नेपालीहरूले यसलाई खकार भनेर बुझ्छन्। खोकी लागेको छ तर कफ आएको छैन भनेको सुख्खा खोकी हो।
घरमा हुने धूलोको कारणले सबभन्दा बढी नाकको एलर्जी हुन्छ अनि खोकी लाग्छ। बसन्त ऋतुमा फुल्ने फुलका कारणले पनि एलर्जी हुन्छ तर नेपालमा यो समस्या एकदमै न्यून छ। यो समस्या छोटो समयका लागि मात्रै हुन्छ। घाँटीको कारणले मात्रै खोकी लाग्ने होइन नाकमा समस्या आएर,ग्याष्ट्रिकको कारणले पनि लाग्छ। पिनास भएर छातीमा समस्या आयो भने पनि खोकी लाग्छ । आस्तुमा एक किसिमको एलर्जी हो जसले गर्दा सुख्खा खोकी र खोकी दुवै लागिरहेको हुन्छ। एलर्जी धूलो,धूँवा र प्रदूषणले गर्दा पनि हुन्छ।
एलर्जीबाट हुने खोकीको उपचार
एलर्जीबाट जोगिनका लागि एलर्जी केले गर्छ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ र आफूलाई कुन एलर्जी भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकियो अनि परीक्षण गरियो भने एलर्जीको पहिचान हुन सक्छ। एलर्जी हुनाको कारण पहिचान गरियो भने एलर्जीलाई निदान गर्न सकिन्छ जोगिन पनि सकियो। यसको परीक्षण गर्ने विभिन्न उपायहरू छन् ।
नाक र घाँटीको एलर्जी भएको कारण पत्ता लगाउन छालामा सम्भावित एलर्जी गर्ने तत्वहरू प्रिक गरेर हेर्न सकिन्छ। यसलाई स्क्रिन प्रिक टेष्ट भनिन्छ। यसो गर्दा के कारणले एलर्जी भएको हो पत्ता लगाउन सकिन्छ। एलर्जी के कारणले भएको हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ। एलर्जीको कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई दबाउने औषधि खानुपर्छ। यसलाई इमिनो थेरापी भनिन्छ। त्यस्तै, बढी रियाक्सनलाई रोक्ने औषधि पनि खान सकिन्छ।
एलर्जी हुने तत्वबाट जोगियो भने खोकीबाट पनि जोगिन सकिन्छ। त्योसँग जोडिएको अरु समस्याबाट पनि जोगिनु पर्छ।
एलर्जीकै कारण खोकी लागेको कसरी थाहा पाउने ?
सुख्खा खोकी नै बढी लाग्ने हुन्छ। धेरै हाछ्यु आउने नाकबाट पानी बग्ने घाटी सफा गरिरहन पर्ने भयो भने एलर्जीको कारण हो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यही आधारमा परीक्षण गर्ने अनि औषधि गर्ने गर्नुपर्छ ।
कसै–कसैलाई खानको एलर्जी पनि हुन्छ। तर यस्तो एलर्जीले पेटमा बढी असर गर्छ। यो खानेकुरासँग भन्दा पनि श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित भएको हुनाले खानेकुराले धेरै असर गर्दैन। धेरै चिसो खाना र चिसो मौसमले एलर्जीको सुरूआत गराइदिन सक्छ । तर चिसो नै मुख्य कारण भने हुँदैन ।
लापरबाही गर्यो भने यो समस्या रहिरहन्छ। संक्रमणले गर्दा नाकलाई हानी गर्न सक्छ। यसैको कारणले नयाँ र डरलाग्दा रोग आउँदैन । तर यो आफैंमा एउटा समस्या हो यसले गुणस्तरीय जीवनशैलीलाई असर गर्छ। विद्यार्थीले पढ्न सक्दैन भने काम गर्नेहरूले खुसीसाथ काम गर्न सक्दैन। जसले गर्दा मानिसको व्यवसायिक जीवनलाई घाटा पुर्याउँछ त्यसैले उपचारका लागि चिकित्सकलाई भेटेर सल्लाह लिनुपर्छ र आवश्यक उपचार गर्नुपर्छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ७, २०७६, ०१:१०:००